Inona no atao hoe Debian CUT? Alternative tsara amin'ny LMDE | Avy amin'ny Linux
Perseus | | Fitsinjarana, soso-kevitra
Ny tetikasa Debian CUT (Fitsapana azo ampiasaina tsy tapaka - fitsapana azo ampiasaina tsy tapaka–) Nipoitra 2 taona mahery lasa izay avy amin'ny tanan'i Joey Hess, izay nitady safidy hafa ho an'ny mpampiasa sy / na ny mpamorona tsy afaka miandry 2 taona (eo ho eo) hahita ny kinova vaovao an'ny Debian (stable). Tetikasa io tsy ofisialy, satria tsy manana ny tohana na ny fanohanan'ny Debian (mbola: P).
Alohan'ny hidirantsika amin'ilay lohahevitra dia andao hofantarina kely ny momba ny "sampana" hafa Debian.
Momba an'i Debian tsy milamina sy fitsapana
<° Debian tsy milamina: io no fizarana izay ampidiran'ny mpamorona kinova vaovao amin'ny fonosany. Saingy, matetika ny fonosana sasany dia tsy azo apetraka amin'ny tsy marin-toerana noho ny fiovan'ny fonosana hafa na ny tetezamita amin'ny tranomboky (tranomboky) mbola tsy vita.
<° Fitsapana i Debian: mifanohitra amin'ny tsy milamina, izy io dia tantanan'ny fitaovana iray izay manome antoka ny tsy fitovizan'ny fizarana iray manontolo. Izy io dia mandray fotsiny ireo fanavaozana tsy mitombina raha efa notsapaina nandritra ny fotoana lava ny fonosana (10 andro amin'ny ankapobeny), tsy misy bibikely famotsoran-keloka vaovao, azo jerena amin'ny maritrano arahana rehetra (oh: PowerPC, PA-RISC, ary milina miorina MIPS), ary tsy tapaka amin'ny fonosana efa misy hafa amin'ny fitsapana. Izy io dia miantoka fa ny fonosana mitarika amin'ny fanandramana dia tsy misy bibikely (toy ny rafitra tsy booting, na X tsy mandeha mihitsy). Izany dia mahasarika an'ireo mpampiasa izay te hanana ny kinova farany an'ny rindran'izy ireo tsy misy miatrika ireo olana matotra mifandraika amin'izy ireo.
Maninona raha mampiasa Debian Testing?
Fitsapana i Debian no misy ny mpamorona Debian amboary ny fizarana milamina manaraka (stable). Na dia mbola io aza no tanjon'izy ireo voalohany, maro ireo mpampiasa no nandray ity kinova an'ny Debiansatria manolotra marimaritra iraisana eo amin'ny "freshness" sy ny fahamarinan-toerana eo amin'ny fonosana. Na izany aza, misy lafy ratsy amin'ny fampiasana fitiliana, noho izany ny tetikasan'ny CUT dia mikendry ny hampihena na hanafoana ireo zavatra ratsy.
Olana fantatra amin'ny fitsapana
<° “Nanjavona” ireo fonosana rindrambaiko: Ny ekipan'ny famoahana dia mampiasa ny fizarana mba hiomanana amin'ny famoahana maharitra manaraka, ary mamoaka fonosana amin'izy ireo indraindray. Izany dia natao mba hahazoana antoka fa ny fonosana hafa dia afaka mifindra monina tsy milamina mankany amin'ny fitsapana, na satria efa ela ny buggy iray fonosana nefa tsy miroso mankany amin'ny vahaolana. Hesorin'ny ekipa ihany koa ireo fonosana raha mino ireo mpitantana fa tsy azo tohanana mandritra ny 2 taona na mihoatra ny dikantenin'ilay rindrambaiko.
<° Fanemorana lava amin'ny famerenana fiarovana: Na eo aza ny fanemorana 10 andro ao amin'ny sampana tsy milamina, dia misy bibikely manelingelina foana (ary ny hadisoam-piarovana tsy ankanavaka) izay vao hita rehefa nifindra tany amin'ny fitiliana ilay fonosana. Ny mpikojakoja dia afaka mamaky haingana ny fonosana iray izay "voavaha" ho tsy marin-toerana, ary mety hiteraka hamehana aza amin'ny famelana ny fonosana hifindra haingana araka izay tratra, fa raha "miraikitra" kosa ireo fonosana amin'ny fizotry ny tetezamita ankehitriny, dia tsy mifindra monina mandra-pahatapitry ny tetezamita. Indraindray dia mety maharitra herinandro maromaro vao hitranga.
Ny fanemorana dia azo sorohina amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana mankany amin'ny fanandramana (amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny tolo-kevitra), saingy tsy dia ampiasaina izany mekanika izany, raha tsy mandritra ny hatsiaka fonosana, izay ahitsian'ny lesoka manokana.
<° Tsy azo apetraka foana: Miaraka amin'ny fitsapana ny fivoarana isan'andro, indraindray ny fanavaozana dia manaparitaka ireo sary apetraka farany azo apetraka (indrindra ny sary netboot izay mahazo ny fonosana rehetra avy amin'ny tamba-jotra). Ny installer Debian mazàna dia manamboatra fonosana haingana izy io, saingy tsy nafindra ho amin'ny fanandramana izy ireo satria ny installer dia tsy tokony hanamarina foana ny fifangaroana fonosana vaovao. Colin watson mamintina ny olana toy izao manaraka izao:
“Elaela ny fahazoana ny kaody ho an'ny mpanorina fanandramana vaovao, ary hijanona tsy voavaha mandritra ny fotoana maharitra ny olana. Ny olana amin'ny fivoaran'ny installer Debian amin'izao fotoana izao dia ny fahaizantsika miadana mamokatra kinova vaovao momba azy. Ny safidinao izao dia ny hiasa amin'ny stable (lozisialy efa antitra loatra), fitsapana (Mety tsara izany, raha tsy hoe indraindray miato ary matetika no maharitra herinandro handaminana na inona na inona), tsy milamina (tapaka foana izy io). "
Miala amin'ilay hevitra taloha hoe: Debian = lany andro fa Milamina
Raha fintinina, ny tetikasa NANAPAKA mitady hanova ny fankasitrahana ananan'ny ankamaroan'ny mpampiasa GNU / Linux Debian, rehefa manandrana manome anay fizarana karazana "Rolling Release", manolotra anay rafitra fandefasana azo antoka fa nohavaozina kokoa noho ny kinova Debian stable.
Inona no azontsika antenaina amin'ny Debian CUT?
<° Ilaina ny fifandraisana Internet amin'ny fametrahana azy, ka ny haben'ny isos dia kely dia kely (18 megabytes fotsiny). Ireo isos ireo dia azo dorana amin'ny CD na mamorona pendrive azo alefa (miaraka amin'ny unebootin ohatra).
<° Raha vantany vao vita ny fametrahana dia afaka mahita rafitra miasa tanteraka isika (mitondra ohatra ny Libre Office 3.4.4, kernel 3.1.0-1).
<° Alohan'ny hanombohana ny fametrahana azy dia afaka mifidy izay tontolon'ny birao tiantsika hapetraka ao amin'ny solosaintsika isika, miaraka amin'ireto safidy manaraka ireto: KDE, XFCE (4.8), LXDE ary GNOME (3.2.1) (miaraka amin'i Gnome no tontolon'ny birao mahazatra). Tsy haiko ny kinova KDE sy LXDE, tsy nosedraiko izy ireo: P.
Ireto misy pikantsary:
Fanamarihana: Raha te hisafidy tontolon'ny birao hafa ankoatry ny Gnome isika dia tsy maintsy misafidy ny safidy safidy Advanced toy ny aseho amin'ireto sary manaraka ireto:
Tsy isalasalana fa safidy tsara hafa ho an'ny Ubuntu sy Linux Mint / LMDE.
Rohy ofisialy: http://cut.debian.net/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Inona no atao hoe Debian CUT? Alternative tsara amin'ny LMDE
61 hevitra, avelao ny anao
ny zavatra ratsy momba ny fitsapana debian, raha ny amiko dia indraindray manome olana miankina amin'ny famoahana izany rehefa manavao ianao, ary mila miandry ianao dia ampahafantaro azy ireo hoe ohatrinona no hamahana azy
momba ny fanapahana an'i debian, ny tena zava-dehibe tsy hita ... inona ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa?
Indro Ilay izy.
Eny, mamaha ireo olana ireo aho amin'ny fampiasana fotsiny:
ary fanavaozana feno ihany no ampiasaiko indraindray.
Mipetraka izao ny fanontaniana: inona ny ao anaty ny list.list? 😛
Mampiasa ny fanavaozana azo antoka ihany koa aho, fa rehefa ilaina ny manao fanavaozana feno dia rehefa misy olana miseho indraindray
Slip kely: P, ny rohy dia efa nampiana, misaotra tamin'ny fandinihana 😉
Manantena aho fa tsy ho ela akory vao ho ofisialy, milamina ny raharaha.
Ity no fomba tokana hieritreretako tsara ny fampiasana ny Debian ... Midika izany, tsy vonona ny hanao varotra ny ArchLinux ho an'i Debian aho, saingy azoko omena an'i Cut ny tifitra ary ho hitako ny fandehany :)
Te hanandrana ny Archlinux aho, saingy tsy manam-potoana ampy hanaovana fametahana milamina aho. Angamba hanandrana aho amin'ny fahavaratra manaraka.
Sebas_vv9127 dia hoy izy:
Raha te hanandrana ny ArchLinux ianao, ary tehirizo ny ora fametrahana, andramo Raha tianao ny Gnome Kahel OS na raha tianao ny Kde Chakra Linux
Mamaly an'i Sebas_vv9127
Mbola tsy KISS io ka aza omena azy
Angamba ny fomba tsara indrindra hanaovan'i Debian fanekena azy amin'ny fomba ofisialy dia ny fampiasana azy na "fanamafisana" ny fisiany.
Farafaharatsiny mba efa ananany ny vatoko XD.
Ahoana ny amin'ny fitoniana? Ny fanavaozana dia toy ny fanandramana isan'andro? Misintona azy aho ary hizaha azy.
Raha ny marina, tsy dia nandinika azy io ela aho, fa hatreto dia mbola tsy nisy alika mafana na inona na inona karazany. Raha ny momba ireo fanavaozana dia isanandro izy ireo.
Azafady ny fanontaniana, antenaiko fa io no farany, miaraka amin'ny Iceweasel 9.0.1 ?.
Aza manahy fa izany no nahatongavantsika teto;).
Izy io dia manana Iceweasel 8.0 sy Icedove 3.16. Mba hametrahana ny Iceweasel 9.0.1 sy Icedove 8 (tsy afaka nanavao ny kinova farany aho farafaharatsiny avy amin'ny repositories ¬¬), dia tsy maintsy nampidiriko ireo repo sid, manavao ny synaptic ary hanome hevitra azy ireo indray.
Misaotra namana, nametraka an'i Cut aho anio hariva, hanome fahatokisan-tena hafa aho.
Mila manandrana ianao. Io ihany no fomba ahafantarana ny tena fandehany. Ary mazava ho azy fa efa tadiaviko. Napetrako tao anaty lisitra io.
Perseus Mendrika esorina ve izany LMDE soloina azy Debian CUT? Sa ny tsy fitoviana tsy dia hoe mahavita azy?
Manontany aho satria mampiasa LMDE ary tsara… raha ity dia mandeha tsara kokoa….
Salama Tina, faly aho nandre anao: D ...
Holazaiko aminao ny tombony azo avy amiko Debian CUT mihoatra ny LMDE:
<° Afaka mametraka Gnome, XFCE, KDE, LXDE.
<° Manana rindrambaiko havaozina kokoa (mety ho havana kely izany, saingy mijanona kely ny LDME toy ny amin'ny lafiny fanavaozana ¬¬)
<° Fanavaozana tsy tapaka (miseho ho ahy isan'andro izy ireo), tsy very ny fitokisan'ny rafitra.
<° Tsy haiko raha ny fahitako azy (nitantara izany tamiko ihany koa i Moscosov), fa ny iray kosa miasa amin'ny "tontolo iainana" amin'ny fomba "maivana" sy haingana kokoa.
Amin'ny farany dia omeny antsika ny antony ... Rolling Release no tsara indrindra, tsotra ... mila manaiky KISS sy voila fotsiny izy ireo, dia mendrika ny hiditra amin'ny fanjakan'ny Arch ary hankafy ny paradisa .... TPT!!!!
Fanatic !!!, heveriko fa ny elav mahantra dia tokony ho masoka mba hanana vady toa izany, hahahahahaha.
Ny "famotsorana an-tsokosoko" dia tokony ho avin'ny kinova samihafa. Lasa ny andro taloha izay "Linux" tsy nilamina "ho an'ny solosaina (heveriko fa mahazo" alika mafana "bebe kokoa ezahina hatao fanavaozana amin'ny fizarana famoahana cyclic).
Raha toa ka tratrarina amin'ny fenitra de facto eo amin'ireo distros izany, dia hanao dingana lehibe izany, manampy amin'ny fanamafisana kokoa ny GNU / Linux ho toy ny safidy matotra "ho an'ny famokarana sy / na ekipa manokana.
Ny semi rolling dia ny ho avy, satria aorian'ny fandaharana rehetra dia tsy nataon'ny fizarana ary mihoatra ny indray mandeha ianao dia afaka manana fanavaozana, ajanony ny fanaovana programa iray izay nandaitra tamin'ny andiany teo aloha, fa amin'izao fotoana izao dia tonga ao an-tsaiko izy ireo rehefa nohavaozina minitube ao amin'ny ubuntu 10.10
Raha ny mahasamihafa azy, raha ny tianao holazaina ny fahatsorana ny fananana rafitra "azo ampiasaina" amin'ny faran'ny fametrahana dia minoa ahy fa mitovy amin'ny LMDE.
Na inona na inona, manontania fotsiny, okay?
Ary miala tsiny amin'ny valiny haingana, ilazako izany noho ny lesoka tamin'ny tsipelina sy ny hatsikana XD hafa
Hitako, ka izao no mandeha ... Ankehitriny, milaza izy fa ny fifandraisana dia vita amin'ny Internet ihany, eny, fametrahana (miaraka amin'ny XFCE 4.8, ohatra) mandra-pahoviana? : F
Maharitra 40 ka hatramin'ny 30 minitra aho, eo amin'ny 5M ny fifandraisako, fa mazàna dia tsy misintona ny bandwidth feno ¬¬ aho
Fanontaniana iray, halefako hizaha toetra azy io fa ... mieritreritra ve ianao fa maharitra ho an'ny tontolon'ny asa izany? Izany no manakana ahy tsy hampiasa roling.
Nampiasa Arch aho nandritra ny herinandro maromaro, ary tena nilamina ny PC. Alao an-tsaina ange ry zalahy Debian fa mbola paranoida kokoa momba ny fitoniana. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Debian Testing aho ary minoa ahy, tsy misy tsy filaminana isan-karazany. Avy eo dia tonga i Debian CUT, izay efa fanandramana misy fitoniana miampy .. Na izany aza, tena nanolorana tena ho havaozina sy hanana fitoniana.
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny fitsapana ny Debian aho ary minoa ahy fa tsy misy tsy filaminana isan-karazany
Uff… ka ao amin'ny Debian Testing dia tsy misy fitoniana isan-karazany, sa tsy izany? …. raha efa nolazaiko izany dia diso tafahoatra i Debian… LOL !!!!
Avia, mihomehy aho… aza raisina ho sarotra amin'ny hafa HAHA.
tsara kokoa ianao fa efa nanomana ny fanilo sy andian'olona romotra hitady anao any an-tranonao aho
Eny, eto aho manana rano roa litatra, ny iray ho an'ny fanilo ary ny iray ho anao ... mba hikoty kely anao ary hanana hatsiaka HAHAHAHAHA !!!!!
XD XD XD XD mini flamewar amin'ny fahitana XD XD XD XD
Toa tara aho ¬¬. Tsy manamafy afa-tsy izay lazain'i elav aho, tena marin-toerana tokoa izy io ary amin'ny teôria dia mihoatra ny fitsapana (lazaiko izany satria tsy afaka nametraka fitsapana debin mivantana tamin'ny solosainako mihitsy aho ary tsy te handray marim-pototra ary hanova ireo repo).
Mandritra ny "fikarohana" alohan'ny lahatsoratra, ny hevi-dehibe momba ny fanapahana debian dia ny fanomezana fitoniana sy "freshness" ho an'ny fampandrosoana na tontolon'ny asa;).
Manana 3 andro amin'ny fitsapana debian aho, namboariko ireo fanavaozana isaky ny 2 herinandro, ka tsy nisy zavatra "hafahafa" nanohina ahy.
Ianao no voalohany novakiako izay milaza fa momba ny fitsapana debian, ny zavatra mahazatra dia ny filazan'izy ireo -ny fitiliana ny debiana dia milamina kokoa noho ny ubuntu- ary mino ahy aho, tao amin'ny Ubuntu dia tsy nanana olana velively aho (manao paranoque foana aho. http://www.ubuntuhispano.org/wiki/configuracion-paranoica-intermedia-ubuntu), afa-tsy ny tsy misy tariby izay tsy azoko nampandeha azy teo am-pofoako izay ananako izao.
Marina izany, tsy nisy nilaza an'izany. Debian Testing dia marin-toerana. Iza no milaza fa tsy nampiasa azy mihitsy used
Andao, ny maha-tanteraka dia ratsy, compa. Ny tenako ohatra ... rehefa nanomboka teto amin'ity izao tontolo izao ity aho dia nampiasa Debian Testing nandritra ny iray na roa volana, ary fantatrao izay? ... Ny Ubuntu 8.10 dia niasa ho ahy milamina kokoa noho ny Debian Testing, ka ny hevitro dia tsy marin-toerana toy ny voalaza i Debian (mazava ho azy, tsy resaka milamina no tiako holazaina fa ny fitsapana).
Lehilahy novakiako diso, novakiako "tsy misy fitoniana" rehefa nanoratra "tsy filaminana" ianao noho izany ny fisafotofotoana nataoko.
Miarahaba anao Perseus, lahatsoratra tena tsara izay manazava ity "kinova" an'i Debian ity.
Fitsapana azy io andro vitsivitsy lasa izay ary nahavita nanadino ahy momba ny LMDE izy, apetaho amin'ny Gnome-Shell ary mahatsiaro maivana kokoa noho ny amin'ny distro hafa izay nanandramako niaraka tamin'io tontolo iainana io, ary ny ambiny dia ny fitoniana mahazatra sy fahefana omen'i Debian. Ho fanolorana torohevitra dia manome soso-kevitra aho hoe na iza na iza mametraka azy dia jereo hoe iza no Mirror haingana indrindra ary ampidiro amin'ny tanana mandritra ny fametrahana azy, satria apetrako ho azy ny iray ary maharitra 2 ora ny fizotrany iray manontolo. 10m.
Mamerina ny fiarahabana sy ny arahaba anao aho.
Misaotra betsaka anao namana, fahafinaretana hahita sy hahita anao eto 😀
I Debian dia tokony hianatra bebe kokoa hiatrehana ity fizarana linux ity, ohatra, azo ampiharina amin'ny fametrahana sy ny fikirakirana, ny zavatra rehetra hatao amin'ny tanana sns ..., Ary ny LMDE dia mampiasa ny Debian Testing ho toy ny Base, dia mitovy amin'ny Debian ary miaraka amin'ireo endri-javatra Mint toy ny MintDesktop Mintoftware MintUpdate sns ... efa vonona ny hiasa ohatra MP3, Flash codecs, sns ... efa tafiditra sy voalamina daholo ...
indrindra dia hoy izy:
Andro vitsy lasa izay dia nametraka an'i Debian 6 tao amin'ny Macbook Pro nataoko virtoaly tamin'ny VMware ho an'ny Mac. Tiako fotsiny izy io hanakorontana sy hianatra Linux nefa tsy ho faty hanapotika ny rafitra satria mpamorona sary aho ary mampiasa OS X amin'ny programa ara-barotra.
Saingy izao dia manana olana amin'ny namako iray aho, na dia vao nanomboka mpampiasa Linux nandritra ny taona vitsivitsy aza ny Ubuntu 9.04 ary nanararaotra ny faniriany hamerina ny disk sy hanavao ny Ubuntu, dia nanolotra azy aho mifamadiha amin'ny Debian miaraka amin'ny LMDE na Debian Cut mba tsy ho faty amin'ny fanandramana. Tsy mamporisika an'i Debian 6 aho satria manan-janaka 2 ianao ary tsy manam-potoana, ka tsy te hanasarotra ny fiainanao aho rehefa misy zavatra tsy ampoizina tonga miaraka amin'ny fonosana na fanavaozana.
Inona no atoronao azy mba hanombohany amin'ny Debian amin'ny fomba tsy mampijaly? LMDE sa Debian Cut? Sa hanana fiainana sambatra kokoa amin'ny Linux Mint 12 ianao?
Mamaly ny superlative
superlative dia atoroko ny Linux Mint 10, 11 na 12 Mety hahasambatra kokoa ny fiainanao izany ary tsy ho sarotra ho an'ny zaza vao teraka izay manomboka amin'ny tontolon'ny rindrambaiko malalaka GNU / Linux… Mirary soa! (ARY)
Voalohany indrindra, misaotra nanoratra. Amin'ireo kinova 3 arosonao, izaho manokana dia manoro hevitra an'i Debian CUT na Linux Mint, ny olana amin'ny LMDE dia amin'izao fotoana izao tsy dia mazava loatra ny toe-javatra misy azy, ny tiako holazaina dia ny olan'ny fanavaozana sy ny fanehoan-kevitra vitsivitsy avy amin'i Clem, izay nomarihiny "andrana." Ny safidy hafa nolazainao, Ubuntu, dia mety ho toa mampisafotofoto na mankahala ny Unity (misy foana ny olona "tia" azy na miafara amin'ny "mankahala" azy), hoy aho izany raha mpampiasa "nentim-paharazana" na tsia manam-potoana hanandramana zavatra somary "vaovao".
Ankehitriny, raha mihady lalindalina kokoa isika, Debian CUT dia manolotra anao ireo tontolo birao 4 malaza indrindra izay misy ao amin'ny GNU / Linux (KDE, Gnome, LXDE ary XFCE), izay tsy azon'ny LM atolotra amin'izao fotoana izao. Mba hahamora ny fampiasana azy sy ny lafiny "manana rafitra feno aorian'ny fametrahana" dia safidy tena tsara ireo distros rehetra ireo. Mikasika ny tontolon'ny birao, azoko atao ny manoro ny XFCE noho ny hafainganana sy ny fahatsorana ary ny fitoviana amin'ny Gnome 2 (tsy isalasalana fa "fialofana" ho an'ireo tsy manaiky ny endrika na fiasan'ilay Gnome 3 vaovao) ny XFCE.
Manantena aho fa nanampy anao 😉
Misaotra betsaka tamin'ny hevitrao. Linux Mint 12 dia napetraka ary hanomboka hilalao ny Debian 6 amin'ny fotoana malalaka aho ary hianatra hatrany. Mila mampiasa OS X aho amin'ny asa, ka tsy afaka mikorontana amin'ny Linux isan'andro.
Manana fanontaniana momba an'i Debian CUT aho, hizaha raha misy afaka milaza amiko zavatra momba izany.
Rehefa mametraka avy amin'ny mini iso Debian CUT mini na netinstall isika dia afaka misafidy ny sampana Debian izay tiana hapetraka, farafaharatsiny amin'ny fomba manam-pahaizana, raha misafidy ny sampana fitiliana isika, amin'ny farany dia mahazo loharano iray.lisitry ny toerana fitahirizana Testing miseho.
Ny fanontaniako dia raha misy olona afaka milaza amiko ny tena fahasamihafana misy ankehitriny, eo amin'ny Debian Testing sy Debian CUT, raha samy manondro ny tahiry mitovy izy ireo.
Ary noho izany, amin'izao fotoana izao, inona ny fahasamihafana misy amin'ny fampiasana ny netinstaller Debian CUT tsy ofisialy sy ny fampiasana ny kinova ofisialy isan'andro an'ny netinstall ho an'ny fitsapana debian, izay hitantsika ihany koa na misy na tsy misy rindrambaiko maimaim-poana, tena ilaina amin'ny tranga misy ahy.
Raha fintinina dia tsy mankasitraka ny fahasamihafana farany eo amin'ny kinova iray sy ny iray hafa aho, manana ny fahatsapana fa amin'izao fotoana izao CUT = Fitsapana.
Ireto ny fahasamihafana lehibe hitako eo amin'ny Debian CUT sy ny fanandramana dia ireto manaraka ireto:
<° Navoaka isan-kerinandro ny sary fanandramana Debian, na inona na inona mety hahatafiditra rindrambaiko "andrana" tsara na tsia. Raha ny momba ny CUT, ny sary dia mivoaka isaky ny 1 na 2 volana, miankina betsaka amin'ny fitsapana ireo fonosana "manan-danja" (ohatra: xorg, kernel, sns.), Izay manampy betsaka amin'ny fitoniana.
<° I Debian CUT dia mampiasa ireto toerana fitahirizana ireto:
mitovy tsy mitovy amin'ny andrana.
Mampiasa sidina aho ary tsy nanana olana: D.
Jim dia hoy izy:
Izaho koa dia efa niasa sidina efa elaela ary tsy nanana olana firy.
Valiny tamin'i Jim
Ufff .. Aza maka fanahy ahy .. aza maka fanahy ahy ... 🙁
Salama olona, ​​hello Perseus, hello Elav (manana anao esdebian aho) vintana afaka nahita ilay tranokala aho, manomboka izao dia hitety eto aho hamaky lahatsoratra tsara. Gaga aho fa tsy nisy nanonona an'ity. manery + backports !!!
Ho ahy dia io no vahaolana. iceweasel nohavaozina, libreoffice, misy ihany koa ny xorg hisintona avy eo ... ary maro hafa. Milamina tsara daholo. Io no ampiasaiko izao ary tsy manova azy intsony aho (efa nofantsihina tamiko ny hevitry ny CUT).
"Havizanana" ihany amin'ny presse + backports:
Ny programa lehibe toa ny blender, gimp, inkscape (ary tsy apetrako ny horonan-tsary. Satria tsy fantatro) dia mety hanana fivoarana tsara any amin'ny sampana hafa, fa ndao ho marin-toetra ... ny fomba fiasan'ny ankamaroan'ny olona (toa ny tranga) ireo tonian-dahatsoratra mahery vaika ireo miaraka amina fitaovana bebe kokoa raha tsy fantatsika sy mila ny fahafaha-manaon'ny kinova taloha. Angamba ny console Python dia olana ihany koa, fa na iza na iza tonga amin'ny programa dia efa afaka mandeha mitady ny loharano ary mametraka azy ireo.
PS: KZKG ^ Gaara… tsapanao fa toa tsy miraharaha ny fitiavanao ny andohalambo ny olona eto… haha… dia miaro azy fotsiny ianao toa adala. Nanohy tulla aho.
Hahahaha tongasoa mpianatra:
Fahafinaretana manana anao eto. Miaraka amin'i KZKG ^ Gaara aza mandray ady .. tranga tsy misy antenaina ary tsy azo atao izany. Marina ny voalazanao momba ireo fandaharana nohavaozina, matetika isika dia tsy mila fampandehanana sasantsasany izay entin'ireo kinova vaovao, fa farafaharatsiny izaho, ny fitoniana dia miteraka ahy hahaha .. Tiako ny mandany ny fampitahorako amin'ny Debian Testing ary mijery ianao, tsy faly mihitsy aho .. Tsy mila mampiasa Sid na Experimental xD xD aho
Faly manana anao eto ary misaotra ny hevitra 😀
Hmbre ianareo sy KZKG ^ Gaara dia manana zavatra hitsikerana anao:
Tianao ny reggaeton, antitra ianao, tianao ny Ubuntu, indraindray kasasanao kely ny baoliko ...
Fomba ahoana ianao? @alunado, misaotra nanoratra.
Mazava ho azy fa tsy nampiasa seranam-piaramanidina marin-toerana aho, fa amin'izay lazainao dia mieritreritra aho fa manao zavatra mitovy i CUT nefa tsy mila an'izany rehetra izany, avelao aho hanazava, ohatra, hatramin'izao, efa nahazo LibreOffice 3.4.5 nohavaozina avy amin'ny " "repos tany am-boalohany an'ny CUT.
Manantena izahay fa hahita anao matetika eto… 😉
Tongasoa alunado 🙂
Ny hoe "miraharaha" ny olona na tsia, tsy raharahako izany, tonga matetika eto ary angamba miova hevitra ianao 😉
fantsona dia hoy izy:
Tsy maintsy nampiasa fitsapana aho ary ……………… tsy misy olana ……… .Raha ny marina dia manidy ahy ny mpampanonta horonantsary misokatra …… nefa tsy fantatro izay ho tohiny ………………. ary mampiasa blender 2.61 inkscape gimp sahy hidrôzenina ofice maimaim-poana sy izay rehetra entiny amin'ny toerana misy anao, ary tsy misy Manjary .................. animense ...... .design ary mihitsy aza aho manao fanambarana ho an'ny fahitalavitra izany rehetra izany amin'ny Debian hakany fanahy azy ireo aho fahazoan-dalana ... …… ..
Mamaly amin'ny fantsona
Royer dia hoy izy:
Salama daholo, efa namaky ilay lahatsoratra momba an'i Debian Cut aho ary nahasarika ny saiko izany. Nosintomiko ilay sary avy tao amin'ny pejiny ofisialy ary rehefa handeha hametraka aho dia tonga amin'ilay ampahany tsy maintsy ampidinina ao anaty tamba-jotra ireo fonosana ilaina, manome safidy roa aho, ny iray dia ny fampidinana ny dika mitovy an'ny Etazonia avy amin'ny sary. debian.org ary ny iray hafa dia ny fametrahana ny mpizara fampidinana amin-tanana.
Rehefa manome safidy hisintona mivantana avy any Etazonia aho dia manome ahy hadisoana izany, milaza fa tsy azo atao ny misintona ireo fonosana ilaina ary satria tena vaovao aho amin'ity lohahevitra ity dia tsy haiko izay modely hampiasako hampidinana ny Debian Hetezo rakitra. Inona no replika na kopy azoko ampiasaina hamitana famaranana mahomby amin'ity fametrahana ity? Misaotra ny rehetra mialoha.
Valiny tamin'i Royer
Mbola eo am-pivoarana? Sa efa voasambotra izy?
Mandeha amin'ny pejy lehibe aho ary mahita fa ny sary farany dia tamin'ny Aogositra 2012, herintaona taorian'ny namoahana farany.
Ubuntu 13.04: marin-toerana ary miaraka amina fonosana vaovao.
Ary tsy ilaina ny mametraka indray satria rehefa mivoaka ny kinova vaovao dia azo havaozina tsy misy olana.
Vao avy nanavao ny 13.10 aho fa tsy nisy olana, tao anatin'ny ora roa dia vonona ny zava-drehetra.
karloz dia hoy izy:
SolidK sy SolidX no vahaolana ho an'ny KDE sy XFC.
Mamaly an'i karloz
Dingana kely iray ho an'ny NASA, dingana iray lehibe ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana